SPAM amin'ny andro | Martech Zone
Zoma, Febroary 23, 2007 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Na dia misy aza ny sivana SPAM rehetra manerantany dia mbola mahazo SPAM ihany aho. Halako ny SPAM, saingy tsy maintsy miaiky ny iray amin'ireo fahafinaretako meloka aho rehefa nandinika ny SPAM, dia mazàna mamaky sasany. Notarafiko haingana izy ireo mba hanandramana mamantatra ireo zavatra tratran'ny sivana izay fanehoan-kevitra mety. Indraindray kosa aho dia mijery vatosoa kely.
Ity ny Spam fanehoan-kevitra tiako indrindra androany:
Salama. Ny deraiko amin'ny tranonkala iray tena tsara. Manam-potoana be aho hahita ny saka malalanao. Betsaka ny mahomby amin'ny fiompiana.
Febroary 23, 2007 amin'ny 8:06 PM
Awe.. Nandresy i Stumpy! Aza atao ambanin-javatra mihitsy ny herin'ny ganagana 4 tongotra.
Btw, misaotra anao nitsidika ny "saka mahafinaritra!"
Febroary 23, 2007 amin'ny 8:11 PM
Miompy saka koa ianao! Mahagaga ianao lehilahy. Rahoviana ianao no matory? 😉
Febroary 23, 2007 amin'ny 8:28 PM
Hehe. Raha sendra misy manontany momba an'i Stumpy… resaka momba ny zefrank vao haingana io tantara alohan'ny hatory.
Zefrank dia iray amin'ireo fahafinaretana meloka.
24 Feb 2007 tamin'ny 2:16 maraina
Te hizara ny toro-hevitrao momba ny fiompiana?
Dia inona no ataonao? Ataovy ao anaty efitrano izy ireo, hidio, miverena amin'ny faran'ny andro ary bam, saka kely mahafatifaty 10 mibanjina anao? 🙂
24 Feb 2007 tamin'ny 8:57 maraina
Mampihomehy loatra. Manana Jack Russell aho izay tsy hamela biby velona hafa ao an-tranonay. Ny vorontsika, Ozzy, no niharam-boina voalohany taminy. Gerbil novidin'ny zanako lahy ho an'ny zanako vavy no lasibatra nanaraka azy. Mpihaza izy… manam-paharetana sy psychotic. Mbola tia azy anefa izahay.
26 Feb 2007 tamin'ny 9:04 maraina
Mety mahatsikaiky ny fanehoan-kevitra SPAM sasany. Efa nanandrana nampiasa iray amin'ireo plugins fiarovana spam momba ny fanehoan-kevitra matematika ve ianao? Hitako fa tena nahomby izy ireo tamin'ny fanakanana ny SPAM.
Ity ny iray ampiasaiko: